Lozam-piarakodia tetsy Marais Masay : olona 1 maty, tsy nisy noraisina ilay Subaru - Informations et Actualités sur Madagascar
Société Lozam-piarakodia tetsy Marais Masay : olona 1 maty, tsy nisy noraisina ilay Subaru
Lozam-piarakodia tetsy Marais Masay : olona 1 maty, tsy nisy noraisina ilay Subaru
by Alpha world on 06 h 07 in Société
Ankoatra ilay olona iray maty, roa miady amin’ny fahafatesana. Voatery nopotehina koa ilay fiara nisokirana ny iray tavela tao anatiny. Izany no vokatry ny lozam-piarakodia tetsy Marais Masay, omaly hariva.
Nandriaka indray ny ra ! Voalaza fa vokatry ny hafainganam-pandeha mafy no antony nahatonga ity lozam-piarakodia mahatsiravina
teny Marais Masay ity. Avy any Andranobevava ilay fiara ary hihazo ny lalana eny Ankorondrano no sendra dongona fampihenana ny hafainganam-pandeha. Nandeha mafy anefa ny fiara ka namantana avy hatrany teo amin’ny andrin-jiro mampisaraka ny arabe roa rehefa natsipin’ilay dongona ny fiara. Mbola hita eo amin’ny arabe ny dian’ny kodiaran’ny fiara. Vokany, naratra mafy ireo olona tao anaty fiara. Potipotika ny tongotry ny mpamily sy ny lehilahy iray teo akaikiny, Nanampy ireo ny taorian’ny mpamily.
Ireo nahita ny fitrangan’ny loza teny an-toerana no nifanome tanana tamin’ny fisokirana ireo niharam-boina tao anaty fiara. Maty teny an-dalana ho eny amin’ny hopitaly ny iray tamin’izy ireo. Ny iray kosa voatery niandrasana ny mpamonjy voina satria tery tao anaty korontambin’ny fiara.
Somary nampanano sarotra ny mpamonjy voina ny famonjena ilay lehilahy tao anaty fiara satria notsindrin’ny fiara. Voatery notsofaina mihitsy ny vatan’ny fiara sy ny varavarana nisokirana azy tao.
Niteraka fitohanan’ny fiara…
Nitohana nandritra ny ora maromaro ny fiara teny Marais Masay, omaly noho ny fisian’ity lozam-piarakodia ity. Nitangorona tsy nisy toy izany koa ireo olona ka nampanano sarotra ny polisy ny fandaminana izany.
Tsiahivina fa efa nisy lozam-piarakodia nitranga ihany koa teto amin’ity toerana ity, roa taona lasa izay. Fiara roa (P. 406 sy P. 206) no nifampitsapa ny tanjaka. Tsy nahafehy ny familiana ihany koa ny mpamilin’ilay P. 406 ka namantana tamin’ny andrin-jiro. Ilay andrin-jiro indray avy eo no nianjera ka nilatsaka tamin’ilay fiara P.206. Olona telo no indray maty tamin’ity lozam-piarakodia ity.
Anisan’ny lalana fitsapatsapan’ireo tanora ny tanjaky ny fiara iny lalana eny Marais Masay iny matetika. Maro amin’izy ireny anefa no tsy mahafehy ny lalana ka lasa mitrongy andrin-jiro. Saika eo amin’ity faritra ity ihany anefa no ahitana izany. Tsikaritra fa efa nataon’ny Jirama roa mihitsy ny andrin-jiro eo an-toerana noho ny fisian’ireo fiara mitrongy matetika ny andrin-jiro. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky iny lalana iny mba hisorohana ny loza mateti-pitranga. Aoka hitandrina ihany koa ireo mpampiasa lalana fa tsy hanampatra diso tafahoatra ny hafainganam-pandeha.
By Alpha world at 06 h 07